Ubuntu 20.04.3 LTS iza neLinux 5.11, Mesa 21.0, izibuyekezo nokuningi | Kusuka kuLinux
Okuhle | 07/09/2021 00:39 | Ukusatshalaliswa
Ukuvuselelwa okusha kwe Ubuntu 20.04.3 LTS isivele ikhishiwe yenza izinsuku eziningana nakuyo izinguquko ezihlobene nokusekelwa kwehardware okuthuthukisiwe zifakiwe, I-Linux kernel nezibuyekezo zesitaki sehluzo, ukulungiswa kwesiphazamisi ne-bootloader.
Futhi ifaka izibuyekezo zakamuva zamaphakeji angamakhulu amaningana ukubhekana nezingqinamba nezinkinga zokuzinza, kanye nokuvuselelwa okufanayo kukhishwa ku-Ubuntu Budgie 20.04.3 LTS, Kubuntu 20.04.3 LTS, Ubuntu MATE 20.04.3 LTS, Ubuntu Studio 20.04.3 LTS, Lubuntu 20.04.3 LTS, Ubuntu Kylin 20.04.3. 20.04.3 LTS neXubuntu XNUMX LTS.
Le nguqulo yamaphuzu wesithathu ihlanganisa zonke izibuyekezo zesoftware ezikhishwe kuze kube yimanje, kanye nezimpawu ezahlukahlukene zokuphepha nokulungiswa kwamaphutha okubanzi.
1 Izici ezintsha eziyinhloko ze-Ubuntu 20.04.3 LTS
1.1 Ungayibuyekeza kanjani isibuyekezo esisha se-Ubuntu 20.04.3 LTS?
Izici ezintsha eziyinhloko ze-Ubuntu 20.04.3 LTS
Ubuntu 20.04.3 LTS kufaka phakathi okunye ukuthuthuka kwe-Ubuntu version 21.04 esingathola ukuthi ukuvuselelwa kwenzelwe amaphakheji kanye nohlobo lwe-kernel 5.11, kusukela Ubuntu 20.04 no-20.04.1 basebenzise i-kernel 5.4 ne-20.04.2 esetshenzisiwe kernel 5.8.
Njengenjwayelo, I-HWE (i-Hardware Enablement Stack) ivuselelwe ngokufika kwe-Linux kernel 5.11 Le nguqulo ifaka izithuthukisi eziningana kuma-Btrfs, igqamisa izinketho zokusebenzisa ongazisebenzisa lapho ubuyisa idatha kusuka kumasistimu wefayela alimele, kanye nokususa ukwesekwa kwenketho ye-mount yehlisiwe ngaphambili "inode_cache" .lungiselele ikhodi ukuxhasa amabhulokhi ngemethadatha nedatha encane kune ikhasi (PAGE_SIZE), kanye nokusekelwa kwesikhala sokuklanywa.
Ngaphandle kwalokho kwengezwe indlela entsha yokunqamula izingcingo zesistimu, ngokususelwa ku-prctl () futhi lokho kuvumela ukuphonsa okuhlukile esikhaleni somsebenzisi lapho ufinyelela ikholi ethile yohlelo futhi ulingisa ukwenziwa kwayo. Lokhu kusebenza iceliwe kuWine neProton ukulingisa izingcingo zohlelo lweWindows, okudingekayo ukuqinisekisa ukuhambisana nemidlalo nezinhlelo ezisebenza ngqo izingcingo zesistimu ngaphandle kokudlula kwiWindows API.
Okwakhiwa I-RISC-V, ukuxhaswa kwesistimu yokwabiwa kwememori ye-Contiguous Memory Allocator kungeziwe (CMA), elungiselelwe ukwaba izindawo ezinkulu zememori ezisebenzisa inqubo yokuhamba kwekhasi. Kwi-RISC-V, kukhona namathuluzi asetshenzisiwe ukukhawulela ukufinyelela ku / dev / mem kanye ne-akhawunti yokuphazamisa isikhathi sokucubungula.
Ngasohlangothini lwabalawuli singathola Ithebula 21.0, ngaphandle kwalokho futhi imvelo yedeskithophu ibuyekezwe nge-GNOME Shell 3.36.9, LibreOffice 6.4.7, Mozilla Firefox 91, GCC 10.3.0, Python 3.8.10, containerd 1.5.2, ceph 15.2.13, snapd 2.49, cloud-init 20.4, kanye nezinye izinhlelo zokusebenza.
Engxenyeni yezingxenye zesitaki sehluzo ezibuyekeziwe, zifaka i-X.Org Server 1.20.11 neMesa 21.0, ezahlolwa ngohlobo lwe-Ubuntu 21.04. Izinhlobo ezintsha zamashayeli wevidiyo zengezwe ama-Intel, AMD ne-NVIDIA chips.
Ngezinhlelo zeseva, i-kernel entsha ingeziwe njengenketho kusifaki, kanye nemihlangano emisha manje izosetshenziselwa ukufaka okusha kuphela: amasistimu afakwe ngaphambilini angathola lonke ushintsho olukhona ku-Ubuntu 20.04.3 ngohlelo olujwayelekile lokufaka isibuyekezo.
Kumele sikukhumbule lokho imodeli yokusekela yokuvuselela eqhubekayo isetshenziselwa ukuletha izinhlobo ezintsha ze-kernel kanye nesitaki semidwebo, lapho izinhlamvu ezibuyiselwe emuva kanye nabashayeli kuzosekelwa khona kuphela kuze kukhishwe isibuyekezo se-Ubuntu LTS segatsha elilandelayo. Isibonelo, i-Linux kernel 5.11 ehlongozwayo ekukhishweni kwamanje izosekelwa kuze kufike ku-Ubuntu 20.04.4, ezonikela nge-Ubuntu 21.10 kernel. Ekuqaleni kuthunyelwe, i-base 5.4 kernel izosekelwa kumjikelezo ogcwele weminyaka emihlanu wokugcinwa.
Ngokungafani nezinguqulo zangaphambilini ze-LTS, izinhlobo ezintsha ze-kernel ne-graphical stack zizobandakanyeka ekufakweni okukhona kwe-Ubuntu Desktop 20.04 ngokuzenzakalela, futhi akunikezwa ngendlela yezinketho. Ukubuyela ku-base kernel 5.4, sebenzisa umyalo:
Ungayibuyekeza kanjani isibuyekezo esisha se-Ubuntu 20.04.3 LTS?
Kulabo abanentshisekelo futhi abaku-Ubuntu 20.04 LTS, bangavuselela isistimu yabo kusibuyekezo esisha esikhishwe ngokulandela le miyalo.
Uma bengabasebenzisi be-Ubuntu Desktop, vele uvule ukuphela kohlelo (bangakwenza ngesinqamuleli esithi Ctrl + Alt + T) futhi kuyo bazothayipha umyalo olandelayo.
Ekupheleni kokulanda nokufakwa kwawo wonke amaphakheji, yize kungenasidingo, sincoma ukwenza ukuqala kabusha kwekhompyutha.
Manje kulabo abangabasebenzisi be-server ye-Ubuntu, umyalo okufanele bawuthayiphe ulandelayo:
Ekugcineni, uma unentshisekelo yokwazi kabanzi ngakho, ungaxhumana nemininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ubuntu 20.04.3 LTS iza neLinux 5.11, Mesa 21.0, izibuyekezo nokuningi